China 410 410s abandayo liqengqiwe stainless steel sheets kwemveliso kunye Factory | IHuaxiao
410 sheet steel stainless amandla aphezulu kunye machinability ezibalaseleyo. Kuya kuba nzima emva konyango lobushushu. Ihlala isetyenziswa njengempahla eluhlaza yokusika izixhobo kunye neetafile. Xa kuthelekiswa ne-410 yentsimbi engenasici, i-410S inomxholo wekhabhoni esezantsi kwaye inokumelana ngcono nokubola kunye nokuqina.
Sino Stainless Capacity malunga 410 410s ezibandayo liqengqiwe intsimbi amashiti, ii-410 410s CRC
I-410S inqanaba elifanayo ukusuka kumgangatho ohlukeneyo welizwe
410S Chemical Icandelo:
C：.0.08，Hayi ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：-0.03 ，P ：.0.040, iKr ：11.5～13.5 ，Ni ：0.6 Ubukhulu，
Iipropathi ezingama-410 zoMatshini:
Uqine:> 415 MPA
410 Ibanga elifanayo kumgangatho welizwe ohlukileyo
410 IComputer Component:
C：.0.08-0.15 ，Hayi ：≤1.0 Mnu ：≤1.0 ， S ：-0.03 ，P ：.0.040, iKr ：11.5～13.5 ，Ni ：0.75 Max，
410 Iipropati zoomatshini:
Amaphepha aqhelekileyo e-Stainless Sheets Umphezulu weMeko
Njengoko kuya kuxoxwa kamva, uninzi lwezinto ezigqityiweyo zorhwebo ezigqityiweyo ziye zaphuhliswa ukuhlangabezana neemfuno zobugcisa zabayili bezakhiwo. Umzekelo, umphezulu unokubonakalisa kakhulu okanye matte; isenokucwebezela, ipolishiwe okanye ibhalwe ngebhosi; inombala, ifakwe umbala, yatyatyekwe okanye yahonjiswa ngepatheni kumphezulu wesinyithi, okanye inokutsalwa, njl. njl. Ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zoyilo zokubonakala. Kulula ukugcina imeko yomphezulu. Ukuhlanjwa ngamanye amaxesha kungasusa uthuli. Ngenxa yokuxhathisa umhlwa, ukungcoliseka komphezulu okanye ukungcoliseka komhlaba okufanayo nako kunokususwa ngokulula.
Sheets Stainless ikamva elizayo
Kuba intsimbi engenasici sele inezinto ezininzi ezinqwenelekayo ezifunekayo kwizinto zokwakha, ngokuqinisekileyo yahlukile kwizinyithi, kwaye ukukhula kwayo kuyaqhubeka. Ukwenza insimbi engenazintsimbi isebenze ngcono kwizicelo zemveli, iintlobo esele zikhona ziphuculwe, kwaye kuye kwenziwa izinyithi ezintsha ezingenazintsimbi ukuze zihlangabezane neemfuno ezingqongqo zezicelo zokwakha ezihambele phambili. Ngenxa yokuphucuka okuqhubekayo kokusebenza kwemveliso kunye nokuphuculwa okuqhubekayo kumgangatho, intsimbi engenasici iye yaba yenye yezona zinto zibiza kakhulu ezikhethwe ngabayili bezakhiwo. Isinyithi esidityanisiweyo sidibanisa ukusebenza, ukubonakala kunye nokusetyenziswa kweempawu, ke intsimbi engenasici iya kuhlala yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwakha emhlabeni. I-China yeNtengiso ye-China yokuThengisa iNethiwekhi ihlanganisa iqonga lenkonzo yentsimbi engenasiseko kunye nolwazi olunikezela ngentsimbi engenasici, ngokusekwa kolwazi lweshishini lesinyithi, ukujongwa kwemizi-mveliso, ulawulo lweshishini, uyilo lwentsimbi engenasici, iforum yentsimbi, izixhobo zemathiriyeli, ulwazi lomboniso, intsimbi engenasici Ulwazi, ukugaywa kwetalente kunye nezinye iikholamu, Ukubonelela ngolwazi kunye neenkonzo zonxibelelwano kumzi mveliso we-China wentsimbi engenasici kwiinkampani ezingamalungu kunye nabasebenzisi kwihlabathi liphela ngolwazi lwamva nje, isiseko sedatha, isiseko sedatha, uhlalutyo kunye noqikelelo, iqonga lonxibelelwano, njl .; ukubonelela ngolwazi lwezorhwebo kumzi mveliso wentsimbi engenasici kunye namanye amashishini ahambelana nawo, fumana amathuba oshishino; isasaza intsimbi engenasici Inkcubeko kunye nobugcisa bokuphila ekhaya, ukubonelela ngolwazi lokusetyenziswa kwesinyithi.
Egqithileyo I-409 409L ebandayo eqengqelwe iityhubhu zentsimbi
Okulandelayo: Amashiti angama-430 abandayo aqengqelekayo
I-410 i-410s ebandayo eqengqelwe i-stainless steel sheets (0 ....